आज एक्कासी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य , आज ताेलाकाे कति ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
आज एक्कासी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य , आज ताेलाकाे कति ?
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । आईतवार प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य ९२ हजार ५ सय रहेको थियो । भने आज तोलामा १ सयले गिरावट आइ प्रतितोला सुन ९२ हजार ४ सय कायम भइ कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९१ हजार ९ सय ५० रहेको छ । महासंघका अनुसार सोमवार प्रतितोला चाँदीको मूल्यमा स्थिरता छाएको छ । आइतवार झैँ सोमवार पनि प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य १२ सय कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल टेलिकमका पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रत्येक महिना न्यूनतम ३८३.०७ रुपैयाँ रेन्टल शुल्क (रन्टल चार्ज) तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ ग्राहकले थोरै रकमको सुविधा प्रयोग गरे पनि रेन्टलबापतको सो रकम तिर्नैपर्ने हुन्छ ।
जुन अहिले पनि कायम छ । यही रेन्टल चार्जबापतको रकमबाट पोस्टपेड प्याक खरिद गर्न, कुनैपनि प्याक खरिद नगरी फोन गर्न, एसएमएस गर्न वा डाटा चलाउन पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका विभिन्न प्याकमा प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढदै गएको छ । ग्राहकले प्याक प्रयोग गर्दा रेन्टल चार्जभन्दा छुट्टै रकम काटिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नो २८३.०७ रुपैयाँ कता हरायो भनेर प्रयोगकर्ता झुक्किने गरेका छन् ।कम्पनीको जीएसएम पोस्टपेड सेवामा विगत लामो समयदेखि यसरी नै बिलिङ हुने गरेको थियो ।